Saturday, 03 December 2016 20:10
❖ တွေးလိုက်တဲ့ အတွေးအားလုံးသည် အနာဂတ်မျိုးစေ့.. သိပ်သေချာနေတာနော်.. “အတွေးအားလုံးသည် ကိုယ်ရဲ့အနာဂတ်မျိုးစေ့ဖြစ်ပါသည်။”
❖ အချိန်တိုင်းနော် အရေးကြီးတယ်နော်။ လူမသိအောင် တယောက်တည်း အခန်းတံခါးပိတ် ခေါင်းမြီးခြုံပြီးတွေးလည်းပဲ မျိုးစေ့ကြတာပဲ။ အဲ့အတွေးလည်းပဲ ကိုယ့်အနာဂတ်ပဲ။
❖ တချို့က ပဋ္ဌာန်းရွတ်ပါတယ်ဘုရား ဘုရားရှိခိုးပါတယ်ဘုရား ဒါနပြုတယ်ဘုရား မအောင်မြင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။ ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အချိန် ဘယ်လောက်ရှိမှာလဲ မိနစ်၂၀လောက်ရွတ်လိုက်တယ် ရွတ်ရင်းတန်းလန်းတောင် စိတ်က ပရမ်းပတာဖြစ်နေသေးတာ မျိုးစေ့ကောင်းလား? ရွတ်ပြီးသွားတော့လည်း ဂိမ်းဆော့ရင်ဆော့တယ် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ကြည့်တယ် အတင်းပြောရင်ပြောတော့ မကောင်းတာကများမနေဘူးလား.. အနာဂတ်မှာချမ်းသာပါ့မလား? အဲတော့ အချိန်တိုင်းအရေးမကြီးဘူးလား။
❖ ချမ်းသာချင်ရင် လက်ရှိအချိန်ကို သတိထားရမယ်။ မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးက အမိန့်ရှိတဲ့စကားက သိပ်နက်ရှိုင်းတာ “လက်ရှိအချိန်ထက် ကောင်းသောအချိန်မရှိပါ” အခုတွေးဆဲပြောနေတာနော်.. တွေးဆဲလေးမှာ ငါ ဘာတွေတွေးလဲဆိုတာ နောက်စိတ်က ပြန်သုံးသပ်ရတယ်.. ဘာမျိုးစေ့လဲ?
❖ တဖက်သားကို တန်ဖိုထားချစ်တဲ့စိတ်ဆိုရင် မဆိုးဘူး အနာဂတ်မှာ နတ်ရော လူရောချစ်မယ်။ ကိုယ့်ကိုဘာကူညီမလဲ ဖြစ်လာတယ်။ တခါ အများချမ်းသာဖို့ စီမံကိန်းချနေလည်းပဲရတယ်။ မိဘအတွက် ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ လုပ်ကိုင်ပေးလည်းရတယ်။ တဖက်သားကြည့်ပြီးတော့ တန်ဖိုးထားပြီးလည်း စကားပြောပေးလည်းရတယ်။
❖ မကျေမနပ်နဲ့ မတရားဘူးထင်တာတွေ လျှောက်တွေး ပူနေရင်တော့ကား အခြေအနေကောင်းလား? ရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြုန်းနေတာ အနာဂတ်ကိုဖျက်စီးနေတာ။
❖ တကယ်တော့ကား ယောဆရာတော်ဘုရားကြီး ပြောတဲ့စကား အင်မတန်ရှင်းတာ... တွေ့မြင်နေရတဲ့ အာရုံတွေက မနောထိပေါ်တာပေ့ါ။ သက်ရှိသက်မဲ့အားလုံးသည် ယူတတ်ရင် ကိုယ့်အတွက်စွမ်းအားတွေပဲတဲ့။ အနာဂတ်အတွက် အောင်မြင်မူတွေပဲ။ သို့သော် ဉာဏ်ဓာတ်မီးနဲ့ယူမှရမှာ။
❖ ဆိုလိုတာကတော့ အချင်းချင်းမြင်တာမို့လား ယူတတ်ရင် အနာဂတ်အတွက် စွမ်းအားဖြစ်နေတာ.. တန်ဖိုးထားချစ်ရတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ များသောအားဖြင့်က ကိုယ်နဲ့မသက်သတ်ဘူးထင်ပြီးတော့နုလုံးမသွင်းကြဘူးပေါ့နော်။ အချင်းချင်းကို ဘာသိဘာသာပဲပေါ့ ဒီတိုင်းပဲနေကြတာပဲ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ချစ်တဲ့ဓာတ်မသွင်းကြဘူး။
❖ ဘာသိဘာသာဆို ဘာသိဘာသာဓာတ်ဝင်သွားတာ.. အနာဂတ်ဘယ်လိုအကျိုးပေးလဲဆိုရင် သူများမှစိတ်မ၀င်စားဘဲနဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုပဲ စိတ်ဝင်စားသောကြောင့် ကိုယ်လည်းဘယ်သူမှ စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး။ မရှိလည်းမသိ ရှိလည်းမသိ ကူညီမယ့်သူပေါ်မလာတော့ဘူး။ တူသောအကျိုးပေပဲလာမှပေါ့။
❖ တဖက်သားကိုကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားရတယ်။ တကယ်ချစ်ရတယ်။ အောင်မြင်တာကို ၀မ်းသာပေးရယတ် လိုအပ်တာကိုဖြည့်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေပေါ်ရတာ။ အဲ့လိုသတ္တိရှိရင် ကိုယ့်ကိုကူညီမယ့်သူ ပေါ်လာတာပဲ။ ကိုယ်စိုက်တဲ့အပင် ကိုယ်ပြန်စားရတာပေါ့။
❖ မရေမရာနဲ့အချိန်ကုန်ရင်လည်း ကြီးတဲ့အခါကြတော့ ၁၀၀မှာ၉၉ကြည့်လိုက်ရင် သူဌေးကြီးလည်းဖြစ်မသွားကြဘူး မဂ်ဖိုလ်လည်းရမသွားဘူး။ မရှိမရှား မရေမရာနဲ့သေကုန်တာများတယ်။
❖ တနေကုန်မှာက စိတ်ကူးတွေက ကိုယ်မျိုးစေ့ကြတာ မသိတော့ မရေမရာနဲ့ အချိန်ကုန်တာ။ မီးဖိုချောင်ကိစ္စတွေ စားမူသောက်မူကိစ္စတွေ မရေမရာပေါ့နော် မေတ္တာမပေါင်းကြဘူး။ ထုံးစံလိုပဲ လုပ်ကိုင်ပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်နဲ့ အိပ်လိုက်စားလိုက်နဲ့ မရေမရာမျိုးစေ့ပဲချထားတော့ သူဌေးကြီးလည်းဖြစ်မသွားဘူး။ မဂ်ဖိုလ်လည်းရမသွားဘူး။ မရေမရာနဲ့ သေသွားတာပေါ့ သဘောပေါက်လား ထူးခြားတဲ့မျိုးစေ့ချမှထူးခြားတဲ့အကျိုးပေးလာမှာပေါ့။
❖ ထူးထူးခြားခြားကုသိုလ် နေ့စဉ်ရှိပစေ။ အမေကိုပြုစုရင်လည်းပဲ အဖေကိုပြုစုရင်လည်းပဲ မေတ္တာအပြည့်ထည့်လိုက် တအားချစ်ပြီး ပီတိဖြစ်ပြီး ပျော်လို့ရှိရင် အနာဂတ်အတွက်အကျိုးပေးတာ။ တာဝန်ကျေလေးဆိုရင်တော့မရဘူး။ မေတ္တာပိုတိုးနော် တိုးတဲ့အခါမှာ ကျေးဇူးတွေမြင်မှ မေတ္တာပေါ်တာ။
❖ ဘုရားရှိခိုလည်း ထုံစံလိုမရှိခိုးနဲ့ ဘုရားကျေးဇူးတွေဖော် ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲချစ်ပြီဒ အေးလာအောင် Crystal ပြောင်းသလို ပြောင်းလာအောင် တကယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သာ ပူဇော်ကြည့် ထူးခြားလိမ့်မယ်။ အနာဂတ်တည်ဆောက်တယ် ခေါ်တယ်။
❖ ဒါမို့ အတွေးအားလုံးသည် ကိုယ်ရဲ့အနာဂတ်မျိုးစေ့ဖြစ်ပါသည်။